The kumwe kuisirwa kuri kuenderera mberi mhosho meseji inogona kuratidza kumusoro kana uchiisa chero chero chidimbu che software ye Windows. Sezvo panogona kuve neyakagadzika chete yekumisikidza maitiro inomhanya, isu dzimwe nguva tine aya mamiriro
Kana usiri kuyedza kuisa chero chimwe chinhu panguva imwe chete, nekukurumidza kugadzirisa ndiko kupedza iyo Windows Yekuisa maitiro kana kuitangazve. Dzimwe sarudzo dziri muchinyorwa.
Ichi chinyorwa chikamu che Windows Installer akateedzana iyo iwe yaunogona kuwana pane yedu saiti. Tarisa uone zvidimbu zvakafanana.
Isu tinofarira kugadzirisa zvikanganiso. Ndicho chikonzero iwe unogona kushanyira Windows 10 Kukanganisa Kugadzirisa Hub iro rinozadzwa nemazita mazhinji uye tutorials.
Pane chinhu chakaipisisa pane kusakwanisa kuzviita gadza chikumbiro chechitatu-chebato sezvo, zvinoita sekunge, chimwe chinhu chiri kungoisa kumashure?
Ndiro kubatirana kwese ne "Chimwe chekuisa chiri kutotanga kufambira mberi" chikanganiso chiri Windows 10. Mhinduro dzipi nedzipi? Kupfuura vashoma, chaizvo.
Kuti uwane zvakanyanya kubva paPC yako unofanirwa kuisa matatu-bato zvinoshandiswa. Kuisa manyorerwo kunowanzo kuve kuri nyore uye kwakajeka maitiro, asi dzimwe nguva zvimwe zvikanganiso zvinogona kuitika.
Vashandisi vakashuma Kumwe kuisirwa kuri kuenderera mberi chikanganiso paunenge uchiedza kuisa imwe application, saka nhasi tirikuratidza kuti ungagadzirisa sei chikanganiso Windows 10.
Takambonyora zvakadzama nezve nyaya iyi zvisati zvaitika. Bhukumaka iri peji kana iwe uchizoida gare gare.
1. Tangazve iyo Windows Yekuisa sevhisi
Windows inovimba nemasevhisi ayo kuitira kuti imhanye nemazvo, uye pane sevhisi inonzi Windows Installer iri kutarisira kuisa software nyowani.
Pese paunoyedza kuisa application nyowani, sevhisi iyi inotanga nekukubatsira iwe kuiisa.
Dzimwe nguva kumwe kugadzirisa kana kusabvisa maitiro anogona kutanga otomatiki kumashure, uye zvinogona kutora Windows Yekuisa sevhisi kuitira kuti umhanye.
Kana iwe ukaedza kuisa imwe software apo Windows Installer iri kumhanya uchasangana nekanganiso iyi. Imwe yedzakareruka nzira dzekugadzirisa dambudziko iri kuvhura Services windows uye kutangazve iyo Windows Yekuisa sevhisi.
Kuti uite izvozvo, tevera matanho aya:
dzvanya Windows Kiyi + R kuvhura Runhare dialog. Pinda services.msc uye tigoshingairira pinda kana chengeta iyo OK bhatani.
Rondedzero yeese masevhisi aripo zvino ichaonekwa. Tsvaga Windows gadza pane iyo rondedzero uye wobva wadzvanya kuti uvhure zvaro.
Kana basa riri kushanda, tinya mira bhatani kuti urimise. Mirira masekondi mashoma wobva wadzvanya kutanga bhatani kuti utange zvakare.
Vhura Services hwindo uye tarisa kana dambudziko ragadziriswa.
Haikwanise kuwana Windows Installer? Zvinhu hazvityisi sezvavanoratidzika! Verenga gwara redu kugadzirisa nyaya!
2. Kupera Windows Yekuisa maitiro
Sezvatakambotaura, Windows Yekuisa sevhisi iri pamusoro pekuisa mitsva yekushandisa paPC yako.
Windows Iyo yekumisikidza maitiro inoenderana neiri sevhisi, uye sekureva kwevamwe vashandisi, unogona kugadzirisa dambudziko iri nekungopedza iyo Msiexec maitiro uchishandisa Task Manager.
Izvi zviri nani nyore, uye unogona kuzviita nekutevera matanho aya:
dzvanya Ctrl + Shift + Esc ako kiibhodhi kuvhura Task Manager.
Enda kune Nzira tabu uye uwane Windows gadza.
Right kurumidza iro uye sarudza Mugumo Basa kubva kumenyu. Kazhinji iwe uchaona iyo 32-bit uye 64-bit vhezheni ye Windows Installer inomhanya. Kana uine akawanda Windows Ma Installer maitiro anomhanya ave nechokwadi chekumisa ivo vaviri.
pedyo Task Manager uye edza kuisa zvakare application.
Mhinduro 3 - Disable Windows Installer sevhisi uye tangazve yako PC
Windows Yekuisa sevhisi yakajairwa mhosva ye Kumwe kuisirwa kuri kutoenderera kukanganisa, uye kana kudzoreredza basa racho kusiri kubatsira, ungangoda kuzvirega kwenguva pfupi.
Ichi chiitiko chiri nyore uye unogona kuzviita nekutevera nhanho idzi:
Vhura iyo Services hwindo. Kuti uwane zvakakwana mirayiridzo yekuita izvozvo, tarisa Solution 1.
Once the Services hwindo rakavhurika, tsvaga Windows gadza sevhisi uye peta iyo mbiri kuti izarure zvivakwa zvayo.
Isai Tanga Yokutanga to Akaremara uye baya Shandisa uye OK kuchengetedza kuchinja.
Mushure mekuita izvo, tangazve PC yako.
Mushure mekunge PC yako yatanga, vhura iyo Services hwindo zvakare.
Tsvaga Windows gadza shandira uye uvhure zvivakwa zvayo.
Isai Tanga Yokutanga to manyuwari uye baya OK uye Shandisa kuchengetedza kuchinja.
pedyo Services hwindo uye edza kuita kuisazve.
Vashoma vashandisi vakashuma kuti vakagadzirisa dambudziko racho nekungochinja iro Tanga Yokutanga of Windows Yekuisa sevhisi ku otomatiki. Iyi nzira iri nyore, uye unogona kuzviita nekutevera matanho ari pamusoro.
4. Ita Disk Kuchenesa
Vashoma vashandisi vakashuma kuti kuita Disk Cleanup gadzirisa nyaya yacho kwavari. Zvinoita sekudaro Kumwe kuisirwa kuri kutoenderera kukanganisa kunokonzerwa nemafaira enguva pfupi akasiiwa neokutanga kuisa.
Nekumhanya Disk Kushambidza iwe unobvisa nyore nyore chero mafaira apfupi akasiiwa neiyo endala yekuisa Kumhanya Disk Kushambidza kuri nyore, uye unogona kuzviita nekutevera matanho aya:
dzvanya Windows Kiyi + S uye pinda disk cleanup. Sarudza Disk Cleanup kubva pamenyu.
Sarudza iyo drive drive, nekukasira inofanira kuve C, uye dzvanya OK. Mirira apo Disk Kutsuka ichitsvaga PC yako.
Kamwe Disk Kuchenesa kuvhura, sarudza zvese zvingori uye tinya izvo OK bhatani kuti uchenese diski yako.
Mirira kuti maitiro apedze uye edza kumisikidza software zvakare.
Kuti uwane akanyanya kuchena-kumusoro isu tinokupa zano kuti utarise zvimwe izvo zvakanakisa zvishandiso zvekudzima mafaira asina junk zvatakasarudza. Unogona kudhawunirodha vhezheni dzemahara dzevanonyanya kuzivikanwa kubva pane zvinotevera zvinongedzo.
Dhawunirodha Wuchenjeri Registry Yakachena
5. Ita Yakachena Boot
Zvinoenderana nevashandisi, dzimwe nguva Kumwe kuisirwa kuri kutoenderera kukanganisa kunogona kuoneka nekuda kwekutanga manyorerwo kana masevhisi. Kugadzirisa dambudziko iri, iwe unofanirwa kuita Yakachena Boot, uye iwe unogona kuita izvo nekutevera nhanho idzi:
dzvanya Windows Kiyi + R uye pinda msconfig. Dhinda pinda kana kudzvanya OK.
System Configuration hwindo rinobva raonekwa. Enda ku Services Tab.
Tarisa Viga zvose zveMicrosoft services sarudzo uye wobva wadzvanya Dzinga zvose.
Zvino enda Tanga tab uye chengeta Vhura Task Manager.
Rondedzero yezvose zviripo zvekutanga zvinhu zvinobuda. Kurudyi tinya chinhu chimwe nechimwe pane izvo uye wosarudza chokukuvadza kubva pamenyu.
Mushure mekudzima zvinhu zvese zvekutanga, vhara Task Manager.
Dzokerazve System Configuration window uye chengeta Shandisa uye OK kuchengetedza kuchinja.
Tangazve PC yako.
Kana PC yako itangazve, tarisa kana dambudziko richiripo. Kana nyaya yacho yagadziriswa, zvinoreva kuti chikumbiro chechitatu-bato kana sevhisi zvaive zvichikonzera dambudziko.
Kuti uone dambudziko, vhura Sisitimu Yekugadziriswa kwewindo uye tangisa mabasa akaremara mumwe nemumwe. Ramba uchifunga kuti iwe uchafanira kutangazve PC yako mushure mekugonesa sevhisi kuitira kuti ushandise shanduko.
Ive neshuwa yekudzokorora maitiro akafanana muTask Manager wekutanga application.
Windows hausi bhuti here? Usavhunduke! Heano akanakisa matipi ekugadzirisa dambudziko!
6. Tarisa Registry yako
Dzimwe nguva dambudziko iri rinogona kukonzerwa nedzimwe tsika mune yako manyoreji, saka uchafanira kugadzirisa pameso idzodzo tsika.
Kugadzirisa rejista yako inogona kuve nzira ine njodzi, saka tinokurudzira kuti uende kunze kwako uye utore sechishandiso kuitira kuti chero zvikaitika zvisirizvo. Kugadzirisa dambudziko iri, ita zvinotevera:
dzvanya Windows Kiyi + R uye pinda regedit. Click OK kana kudhinda pinda.
Mune iyo kuruboshwe panechinjika kuenda
Kana usiri kuwana kiyi iyi, enda ku
Mune yekurudyi pane kutyora chibvumirano kukoshesa uye peta iyo mbiri. Bvisa kukosha kubva Kukosha kwe data munda ndokudzvanya OK kuchengetedza kuchinja.
pedyo Registry Editor.
Mushure mekuita shanduko kune rako rejista, unofanirwa kuseta iyo Nhamba yekutanga ye Windows gadza shandira Akaremara. Mushure meizvozvo, dzosera PC yako uye isa iyo Nhamba yekutanga nokuti Windows Installer ku manyuwari.
Kuti uwane zvakakwana mirayiridzo yekuita izvozvo, tarisa Solution 3.
Usazvirase pachako mune zvese hunyanzvi izvi uye isa registry reodha kuti hupenyu hwako huve nyore!
7. Uninstall uye kudzoreredza Hofisi
Vashandisi vakashuma Kumwe kuisirwa kuri kutoenderera message yekukanganisa uchiisa Microsoft Office. Izvi zvinogona kuitika nekuti imwe Office kuisirwa kana kugadzirisa yaive ichimhanya mumashure pawakatanga seta.
Kugadzirisa dambudziko iri, tarisa chiratidzo cheHofisi mune tereyi system kuti uone kana kuisirwa kuri kuita. Kana Hofisi iri kuisa kana kugadzirisa, iwe unofanirwa kumirira kuti maitiro apedze.
Kana pasina Office icon mu system tray, iwe unofanirwa kusunungura uye kudzoreredza Hofisi. Kuti usunungure Hofisi, ingotevera matanho aya:
Download ichi chinhu.
Mushure mekunge kudhanilodha kwapera, mhanyisa iyo mudziyo.
Tevedza rairo yekubvisa Hofisi kubva kuPC yako.
Kana iyo nzira yekusaburitsa yapera, tangazve komputa yako.
Mushure meizvozvo, edza kuisa Hofisi zvakare uye tarisa kana dambudziko ragadziriswa.
8. Uninstall Java uye tora kunze kwemhepo simaki
Vashandisi vakashuma iyi meseji yekukanganisa ivo vachiisa Java paPC yavo. Kugadzirisa dambudziko iri unofanirwa kusunungura yako yazvino vhezheni yeJava. Kuti uite izvozvo, tevera matanho aya:
dzvanya Windows Kiyi + ini kuti uzarure iyo Settings app.
Tsvaga Java pane runyorwa wobva wadzvanya Uninstall bhatani kuti ubvise.
Mushure mekunge Java isunungurwa kubva kuPC yako, unofanirwa kudaro dhawunirodhi yekumisikidzwa yeJava. Mushure mekudhanilodha pasi, tangai uye tevera mirairo pachiratidziri.
9. Bvisa zvinetso zvinoshanda neRevo Uninstaller
Kumwe kuisirwa kuri kutoenderera kukanganisa kunogona kukonzerwa neinenge chero yakaiswa application paPC yako. Kugadzirisa dambudziko iri, iwe unofanirwa kuita zvishoma zvekutsvaga uye nekutsvaga iyo dambudziko kune rako pachako.
Mushure mekuwana iko kushandiswa, iwe unofanirwa kushandisa Revo Uninstaller kana chero chero chinhu chakafanana. Ehezve, iwe unogona zvakare kubvisa iwo basa nekuenda kuZvirongwa app.
Vazhinji vashandisi vanokurudzira kushandisa yechitatu-bato uninstiner nekuti ivo vasina kukundwa vanozoita yakadzama uninstall.
Kugara uchisaburitsa kunogona kusabvisa marekitori ekunyoresa kana mafaira akasara, uye ichi ndicho chikonzero nei kazhinji zviri nani kushandisa yechitatu-bato risina uninsteta saRevo. Mushure mekubvisa zvachose basa rine dambudziko, tarisa kana dambudziko ragadziriswa.
Unogona kudhawunirodha wemahara imwe yeinokurudzirwa isina kubviswa kubva pane zvinotevera zvinongedzo.
IoBit Uninstaller (vakasununguka)
10. Re-kunyoresa Windows gadza
Muzviitiko zvakawanda kukanganisa uku kunokonzerwa ne Windows Installer, uye imwe mhinduro ingangodaro kunyoresa zvekare Windows Installer. Izvi zviri nyore kuita uye zvinoda kuti iwe uise mirairo miviri mu Raira Prompt.
dzvanya Windows Kiyi + X kuvhura Win + X menyu. Sarudza Raira Prompt (Admin) kubva pakurongwa.
apo Raira Prompt inotanga, iwe unofanirwa kuisa mitsara inotevera:
Mushure mekunge mairairo ese aitwa, vhara Commander Prompt uye tarisa kana dambudziko ragadziriswa.
Verenga chinyorwa chedu kuti uve nyanzvi mu Command Prompt!
11. Gadzira nyowani Windows mushandisi
Kana pasina mhinduro dzakapfuura dzinoshanda, yako Windows Mbiri yemushandisi inogona kukanganiswa. Kana zvirizvo, iwe uchafanirwa kugadzira chimiro chitsva chemushandisi wochishandisa icho pachinzvimbo.
Kugadzira nyowani Windows mushandisi account iri nyore, uye iwe unogona kuzviita nekutevera nhanho idzi:
sarudza Maakaunzi> Mhuri & nevamwe vanhu.
In Vamwe vanhu chikamu sarudza Wedzera mumwe munhu pane iyi PC.
sarudza Ini handina ruzivo rwekuti munhu uyu apinde-saini.
sarudza Wedzera mushandisi pasina a Microsoft account.
Seta zita remushandisi reiyo nyowani account account uye tinya Next. Kana iwe uchida, iwe unokwanisa zvakare kuchengetedza iyo account itsva nepassword.
Mushure mekugadzira imwe mushandisi account, buda muye yedu ikozvino account uye shandura kune idzva. Tarisa uone kana meseji yekukanganisa yaonekwa pane imwe itsva account account.
Kana zvese zvakarongeka, unogona kuda kufambisa yako mafaera kuaccount nyowani wozotanga kuishandisa seakaundi yako hombe.
12. Gadzira iyo "Kumwe kuisirwa kuri kufambira mberi" kukanganisa kweVisual Studio 2015
Solution - Gadzirisa rako rejista
Kumwe kuisirwa kuri kutoenderera kukanganisa kunogona kuoneka paunenge uchiisa chero chekushandisa, uye vashandisi vakashuma kuti chinoonekwa vachiri kuisa Visual Studio 2015.
Kugadzirisa dambudziko iri, iwe unofanirwa kubvisa imwechete kukosha kubva kune rako rejista. Izvi zvakapusa, asi usati waita chero shanduko kurejista yako, isu tinokurayira zvakasimba kuti ugadzire backup.
Nekuita izvi, unogona kugadzirisa chero zvingaitika zvingaitika mushure mekugadzirisa rejista. Kugadzirisa dambudziko iri, tevera matanho aya:
Open Registry Editor. Iwe unogona kuzviita nekumanikidza Windows Kiyi + R vachipinda regedit.
apo Registry Editor anotanga, famba kuenda
Mune yekurudyi pane locate KubiriraFileRenameOperations kukosha. Right kurumidza iro uye sarudza Kudzima kubva pamenyu. Isu tinofanirwa kutaura kuti kudzima tsika kubva kuhunyorwa kunogona kuendesa kune mamwe matambudziko, saka tinokupa zano kuti uite backup ye registry yako zvingangoitika.
Mushure mekubvisa kukosha uku, vhara Registry Editor.
Edza kuisa Visual Studio 2015 zvakare.
Haukwanise kuwana Registry Mharidzo? Zvinhu hazvisi zvinotyisa sezvavanenge vachiita. Tarisa ichi chinyorwa uye gadzirisa nyaya nekukurumidza.
Kumwe kuisirwa kuri kutoenderera kukanganisa kunokutadzisa iwe kuisa software nyowani. Iri rinogona kuve dambudziko rinoshungurudza, asi isu tinovimba kuti wakarigadzirisa nekushandisa rimwe remhinduro dzangu.
MIBVUNZO: Dzidza zvakawanda nezve kumwe kuisirwa kuri mukufambira mberi kukanganisa
Unotarisa sei kana kumwe kuisirwa kuri kufambira?
Mukana wakanakisa kuvhura Task Manager uye nekutsvaga izvo zvakajairwa Windows yekumisikidza setup icon kana zita rine chekuita nesoftware iwe yawachangobva kuisa kana kugadzirisa.
Ndingaona sei kuti zvirongwa zvakaiswa?
Vhura iyo Start Menyu uye tanga kupuruzira kuburikidza nehurefu runyorwa rwezvirongwa zvakaiswa. Zvikasadaro, enda kuControl Panel -> Zvirongwa uye maficha -> Wedzera kana Bvisa chirongwa uye ipapo iwe unofanirwa kuwana zvese zvakaiswa. Chinyorwa chingangodaro chisina Windows zvirongwa. Izvo zvinogona kuwanikwa mune iyo Apps & maficha chikamu mune iyo Zvirongwa App.
Ndinomanikidza sei kumisa kuisirwa?
Right kurodha pane taskbar uye kuvhura Task Manager. Dzvanya Nzira tabo. Sarudza inorex.exe, kurira chaipo pairi uye Kupera Maitiro.